Iyo 3D Kudhinda Tekinoroji Inochinja Sei Ramangwana Redu | Martech Zone
Iyo 3D Kudhinda Tekinoroji Inochinja Sei Ramangwana Redu
Muvhuro, April 18, 2016 Muvhuro, April 18, 2016 Douglas Karr
Unopfeka ringii yakakura? Ko 1/2 karati yedhaimondi ring inotaridzika yakakura kwazvo pamunwe wako? Zvakanaka, kana iwe uine 3D Printer padyo, Brilliance inokutendera iwe purinda prototype yekubatanidza mhete muhukuru hwakawanda izvozvi uye edza ivo vari pamba kuti vazvionere mega. Hapana chikonzero chekusiya imba yako uye kupfuura nemusangano wepamusoro-wekutengesa nekutengesa jeweler, izvozvi unogona kushambadzira mutengo wakanakisa uye chakanakisa chigadzirwa pamhepo uye uve nechokwadi chekuti chinokwana uye chinotaridzika chakanaka pane waucharoora!
Uyu unongova muenzaniso mumwe webhizimusi rinoshanduka rinochinja mashandisiro atinoita kubva kunyaradzo yehofisi yedu kana imba.
Coca-Cola akamhanya a Mini ini mushandirapamwe uyo wakabvumidza mafeni kupurinda kubva ku 3D modhi yakafanana ivo pachavo.
eBay Chaiyo inobvumira vashandisi kurodha pasi yepamutemo Anwendung uye kugadzira zvakasarudzika zvigadzirwa uye zvishongedzo.
Dita Von Teese akatanga a 3D-yakadhindwa chipfeko, kubatana pakati pemugadziri Michael Schmidt uye mugadziri Francis Bitonti.
Volkswagen yakakurudzira vateveri veDanish kuti dhizaina yavo yekurota Polo kuburikidza newebhusaiti yavo.
BelVita Breakfast Biscuits yakazivisa makwikwi matsva ne 3D mikombe yakadhindwa pakati pemubairo.
Kune epamhepo yekutengesa masaiti, iwo mikana isingaperi pamunhu uye prototyping. Hapana chimwe chinokurumidza kupfuura kupfira kubatana pakati peboka repamhepo, kana kudhinda chikamu chetsika yemota yako mumaminetsi mashoma. Mhando dzinogona kubatanidza vatengi zvakadzama nekupa zvakagadzirwa zvigadzirwa kuti vadhindise kumba.
Iyi infographic kubva kuBrilliance inofamba nenzira sere8 iyo kudhinda kwe3D kuchange kuchichinja hupenyu hwedu, kubva pakutenga, kudya, kudzidzisa, kutyaira, kutenga dzimba, kuchengetedza nharaunda, kurapwa, uye kugadzira dzimwe nzira dzekugadzirisa hupenyu hwedu.
Tags: 3d kudhindabelvitakubwinyacoca-colaebay chaiyofashonimini inipoloVolkswagen
Kugadzira Kwemunhu Pamwe: Maitiro Ekunyora NezveZvedu Peji